चिन्नुस्, यो बर्षको देशभरका पाँच सर्वोत्कृष्ट किसान ! तस्विरसहित – Newsagro.com :
Agriculture Feature Main News Policy Slider
June 13, 2017 June 14, 2017 NewsAgro अफजल हुसैंन, ईन्द्रकुमारी लावती, उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार, उत्कृष्टलाई एक लाख, कृषि विकास मन्त्रालय, खड्गसिंह बिष्ट, डडेलधुरा(उत्कृष्ट), तरकारी किसान, थमबहादुर रजाली मगर, नवलपरासी(उत्कृष्ट), पाँचथर(उत्कृष्ट), बाँके (उत्कृष्ट), बाख्रा पालक किसान, माछापालक किसान, यि हुन्, यो बर्षको देशभरका पाँच उत्कृष्ट किसान, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठ, सर्लाही (सर्वोत्कृष्ट), सर्वोत्कृष्टलाई दुई लाख, सुन्तला किसान, सुमेरसमशेर जवरा
यो समाचार 2709 पटक पढिएको
सर्वोत्कृष्टलाई दुई लाख, उत्कृष्टलाई एक लाख
काठमाडौं । सरकारले यो बर्ष देशभरबाट उत्कृष्टमा छनौट भएका पाँच जना किसानलाई मंगलबार राजधानीमा सम्मान गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले छनौट भएका पाँच जना किसानलाई उत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार प्रदान गरेको हो । मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठले पाँचै जना किसानलाई नगद र कदरपत्रसहित सम्मान गरेका थिए ।
तस्वीर : लेखनाथ पोखरेल/ न्युज एग्रो
मन्त्रालयले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको पिडारी टोलका माछा पालक किसान अफजल हुसैंनलाई यो बर्षको लागि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको छ । उनलाई नगद दुई लाखसहित कदरपत्रका साथ सम्मान गरिएको थियो । पुरस्कार ग्रहण गर्दै हुसैंनले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बिमा र बैंक ऋण सुविधा ग्रामिण भेगका किसानले पाउन नसकेको गुनासो पोखेका थिए ।
उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बिमा र बैंक ऋण सुविधा पहुँच भएका ठूला शहरियाका किसानले मात्रै पाउदै आएका छन् । उक्त सुविधा प्राप्त गर्न हाम्रो लागि आकाशको फल आँखा तरी मरजस्तै बनेको छ । बिमा गराएका कतिपय किसानले बिमा रकम क्षतिपूर्ति पाउन धाउदा धाउदै थाकिसके तर अहिलेसम्म पाउन सकेन ।’
सरकारले पाँचथर मिक्लाजुंग गाउँपालिकाको कुरुम्बा टोलका इन्द्रकुमारी लावतीलाई सुन्तला खेतीसहित एकीकृत खेतीतर्फ, डडेलधुराको अजमेरु गाउँपालिकाका खडकसिंह विष्टलाई बाख्रापालनतर्फ, नवलपरासी हुप्सेकोट गाउँपालिका वेलहानी टोलका थमवहादुर रजाली मगरलाई तरकारी खेतीतर्फ र बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सुमेरसमशेर जवरालाई जनही एक एक लाखको नगदसहित उत्कृष्टको कदर पत्र प्रदान गरेको थियो । किसानी पेशा र कृषि क्षेत्रको सम्मान गर्ने उद्देश्यले गत् आर्थिक बर्ष २०७०।७१ देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो । कार्यक्रममा कृषि सचिब डा. सुरोज पोखरेल र पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिब डा. युवकध्वज जिसीले शुभकामना दिएका थिए ।
के भन्छन, पुरस्कृत किसान ?
१. अफजल हुसैंन, माछापालक किसान, सर्लाही (सर्वोत्कृष्ट)
सुरुमा म ७५ लाख रुपैयाँको लगानीमा ६ विगहाको जग्गामा १० वटा पोखरी निर्माण गरेको थिए । त्यही पोखरीमा कार्प र पंगासियस जातको माछा पाल्दै आएको थिए । हरेक बर्ष लगानी थप्दै गए । यसरी अहिले म सँग ११ विगहा जग्गामा १९ वटा पोखरीहरु छन् । अहिले मेरो लगानी दुई करोड २५ लाख पुगेको छ । बार्षिक रुपमा साढे तीन करोड मूल्यबराबरको ९० मेट्रिक टन कार्प र पंगासियस जातको माछा उत्पादन गर्दैआएको छु । बर्षभरीमा सबै खर्च कटाएर वार्षिक रुपमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नाफा कमाउदै आएको छु ।
यसअघि म २०४१ देखि २०६९ सम्ममा म आफै मालिक भएर खाँडसारी चिनी मिल सञ्चालन गरे । सुरुमा राम्रो भएपनि पछि घाटा लाग्दै गएपछि उक्त चिनी मिल बन्द गरी माछा पालनमा होमिए । उत्पादन भएका माछा बिक्री गर्ने खुद्रा व्यवसायीलाई मैले मोटरसाइकल पनि उपलब्ध गराएको छु ।
यो बर्ष मात्रै मैले यस्ता तीन जना खुद्रा व्यवसायीलाई तीन थान मोटरसाइकल खरिद गरी उपलब्ध गराएको छु । भारतबाट कमर्शमा ग्रेजुएट गरेपछि अमेरिकाबाट कृषि अर्थशास्त्रमा पीजि गर्न भनेर नाम पनि लेखाए । तर बुबा निक्कै विरामी भएपछि त्यहाँ पढ्न जान सकिन् । भारतले गरेको नाकावन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण गत्बर्ष ६८ लाख रुपैयाँको घाटा पनि सहनु पर्यो । सरकारले भण्डारण, सुलभपूर्ण बैंक ऋण र बिमाको व्यवस्था गरिदिए हामीजस्ता किसानले निक्कै राहत पाउनेथ्यो ।
२. सुमेरसमशेर जवरा, माछापालक किसान, बाँके (उत्कृष्ट)
भारतबाट कृषि बिषयमै ग्रेजुएट गरेर अमेरिकाबाट वातावरण बिषयमा समेत मास्टर्स गरेको छु । यति हुँदा हुँदै पनि मैले कृषि पेशालाई नै रोजे । म २०३६ सालदेखि माछाको भुरा उत्पादन गर्ने काममा संलग्न छु । मसँग चार माउ पोखरी गरी अहिले १५ वटा पोखरी छन् । जसबाट सात प्रकारका जातको माछाको भुरा उत्पादन गर्दैआएको छु । विभिन्न उन्नत जातको गुणस्तरीय माछाको ह्याचलिंग, प्राई, फिंगरलिंग र यरलिंग उत्पादन गरेर मध्य र सुदुर पश्चिम क्षेत्रका नौं जिल्लामा आपूर्ति गर्दै आएको छु । बार्षिक रुपमा ३० लाख मूल्यबराबरको साढे पाँच करोड गोटा माछाको भुरा उत्पादन गरी सबै खर्च कटाएर बर्षमा २० लाख नाफा गर्छु ।
३. थमबहादुर रजाली मगर, तरकारी किसान, नवलपरासी(उत्कृष्ट)
म मास कम्युनिकेशन(पत्रकारिता) को विद्यार्थी छु । केही समय चितवनको सिनर्जी एफएममा पनि काम गरे । तर अन्तिममा कृषि पेशालाई नै रोजे । कृषिप्रति युवाहरुको आर्कषण घट्दै गएको र युवाहरु खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि पलायन हुन लागेको अवस्थामा मैले चुनौती दिएर कृषि पेशालाई रोजे । सुरुआत ताका म पनि वैदेशिक रोजगारकै मुख ताकेको थिए । तर मेरो श्रीमति ईन्दिरादेवीले मेरो साथ दिइन् । उनले मलाई धेरै सम्झाइन् । अन्ततः म नेपालमै केही गर्ने लक्ष्य बनाए । म त्यति सम्पन्न घरको होइन् ।
बिहे भएपछि पहिलो पटक ससुराली जाँदा मसँग जम्मा पाँच रुपैयाँ थियो । जम्मा पाँच रुपैयाँका कारण त्यो बेला ससुरालीमा मैले व्यवहार पनि चलाउन सकिन् । म निक्कै लज्जित महसुस गरे । त्यहि वेला नेपालमै केही गर्छु भनेर मनमनै कशम पनि खाए ।कशम त खाए । तर पैसा मसँग थिएन् । यस्तो वेलामा मेरो श्रीमति ईन्दिराले भएको सबै गहना बेचेर मलाई १७ हजार दिइन् । त्यसपछि पारिवारिक सदस्यहरुसँग सरसापट गरी ४७ हजार जम्मा गरे । त्यही पैसाले २०६८ सालमा तरकारी खेती गर्न सुरु गरे । अहिले म सोईल लेस प्रविधिबाट बेर्ना तयार गर्छु ।
प्लास्टिक, मल्चिंग तथा ट्रस्ट पाइपको थाक्रो र थोपा सिंचाई प्रविधिको प्रयोग गरी अढाई बिगहा जग्गाबाट तरकारी उत्पादन गर्दैआएको छु । यो काममा मेरो श्रीमतिले मलाई ठूलो साथ दिएकी छिन् । अहिले म बार्षिक ८० मेट्रिक टन गोलभेडा, ३० मेट्रिक टन काक्रो, २० मेट्रिक टन बोडी, १८ मेट्रिक टन करेला, दुई मेट्रिक टन भेडे खुर्सानी, १६ मेट्रिक टन फर्सी र एक मेट्रिक टन हरियो खुर्सानी फलाउदै आएको छु । वार्षिक ३३ लाखको तरकारीको कारोबार गरी सबै खर्च कटाएर २० लाख जाति नाफा हुन्छ ।
४. ईन्द्रकुमारी लावती, सुन्तला किसान, पाँचथर(उत्कृष्ट)
म सुन्तला खेतीमात्रै होइन् पशुपन्छी पालन र अलैचीको खेती पनि गर्दैआएको छु । २०५३ सालदेखि सुन्तला खेतीमा होमिएको मसँग अहिले ६० रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती छन् । जसमा ६ सय ५० वटाभन्दा बढी बोट छन् । यसैगरी १८ रोपनीमा तरकारीको खेती गरेकी छु । ५० वटा पशुपन्छी छन भने अलैंचीको १० हजार गोटा बोट पनि रोपेकी छु । मिनि टेलर, ह्याण्ड स्प्रेयर तथा फ्रुट स्पेयरको सहयोगमा खेती गर्दैआएकी छु । सबै खर्च कटाएर मैले २२ देखि ५५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छु ।
५. खड्गसिंह बिष्ट, बाख्रा पालक किसान, डडेलधुरा(उत्कृष्ट)
२०७० देखि व्यवसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दैआएको छु । १५ बर्षअघि मैले ९० हजारको लगानीा १६ वटा बाख्राबाट बाख्रापालन सुरु गरेको थिए । अहिले मेरो फार्ममा सानन, वोयर, लामकाने र खरीजातको १ सय ८० थान बाख्रा छन् । २० रोपनीमा घाँसको खेती पनि गर्दैआएको छु । सबै खर्च कटाएर म वार्षिक रुपमा आठ लाखसम्म नाफा गरेको छु ।
← मुुगुको कृषि र पशुको प्राविधिक समितिको सूचना
चार हजार दुधालु गाई विमानमा यात्रा गर्दै →
यो समाचार 31725 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 31381 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 22817 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 3718 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले